3 dhinac oo ugu raaxo badan galmada haweenka uurka leh | Raganimo University
3 dhinac oo ugu raaxo badan galmada haweenka uurka leh
February 3, 20192 minutes
Dhaqaatiirtu waxay isku raacsanyihiin in haweenka uurka leh ay amaan u tahay in loo galmoodo. Oo waliba inta goor aad doontaan ayaad isku galmoon kartaan, iyadoo taasi aysan wax dhib ah u keenin ilmaha. Xitaa dumarka qaar ayuu kacsigu ku siyaadaa xiliga ay uurka leeyihiin, qaastan bilaha ugu dambeeya.
Balse marka dumarka ay gaaraan bilaha dambe ee uurka, waxaa laga yaabaa in dhinacyada galmada qaarkood ay ku xanuunsadaan. Hadaba dhinacyadee ugu raaxo badan galmada dumarka uurka leh.
Jiif dhinac dhinac
Dhinacaan galmada ayaa ah mid aad ugu fudud dumarka uurka leh. Ninka iyo gacalisadiisa ayaa dhinac dhinac u seexanaya, iyadoo uu gadaal ka soo galinayo. Waxaa lagu sheegaa in uu yahay dhinaca ugu sahlan dumarka maadaama uusan saarnayn wax culeys ah gabadha.
Iyada oo dusha saaran
Sida ku cad ciwaanka, gabadha ayaa dusha ka saaran ninka oo jiifa. Iyadoo ku fariisanayna guska iyadoo wajahaysa ninka. Raaxada dhinacaan waxa uu ku xiranyahay culeyska gabadha iyo cabirka guska ninka. Haddii uu yahay mid aad u gus weyn waxaa taxadar mudan in uusan si qoto dheer u galin, maadaama taasi ay xanuun ku dhalin karto gabadha. Balse haddii aysan gabadhu aad u cusleyn iyada ayaa maamuli karta hawsha.
Gabadha ayaa ku fariisanayso geeska sariirta, iyadoo ka dibna gadaal u jiifanaysa oo xusulada isku celinaysa. Oo markaa lugaha kala fogeynaysa. Ninka ayaa isaga oo jilbaha ku istaagan sidaa ku soo galaya lugaheeda dhexdooda. Dhinacaan ayaa ah mid aad ugu raaxo badan gabadha iyo ninka. Iyadoo si sahlan loo kontorooli karo xawaayaha iyo qotoda.